Shina: fanatsarana ny tambajotra fitaterana vaovao lehibe amin'ny 2025
Janoary 19, 2022 0 Namaky 1 aho
Ny Filankevi-panjakana ao Shina dia namoaka antontan-taratasy mamaritra tanjona lehibe ho an'ny fampandrosoana ny tambajotran'ny fitaterana ao amin'ny firenena ao anatin'ny drafi-drafitra dimy taona faha-14 manomboka amin'ny 2021 ka hatramin'ny 2025.
Ny lalamby haingam-pandeha dia hiitatra hatramin'ny 50,000 kilometatra amin'ny 2025, miakatra amin'ny 38,000 kilometatra amin'ny 2020, ary ny 250-km dia antenaina handrakotra ny 95 isan-jaton'ny tanàna misy mponina mihoatra ny 500,000.
Shina hanana 165,000 kilometatra ny lalamby amin’ny 2025, raha 146,000 kilaometatra ny dimy taona talohan’izay; seranam-piaramanidina sivily maherin'ny 270, niakatra avy amin'ny 241; 10,000 kilometatra ny lalamby an-tanàn-dehibe, niakatra avy amin'ny 6,600 kilometatra; 190,000 kilometatra ny lalambe, raha 161,000 kilaometatra; ary 18,500 kilometatra amin'ny lalan-drano any an-tanety avo lenta, raha 16,100 kilaometatra.
Hanjary maitso kokoa koa ny rafi-pitaterana. Hahita ny 72 isan-jaton'ny fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'ny angovo vaovao ny tanàn-dehibe, fanatsarana avy amin'ny 66.2 isan-jato, ary hihena 5 isan-jato ny fatran'ny gazy karbonika amin'ny sehatry ny fitaterana.
Ny tanjona lehibe dia ny hahatratra ny fampandrosoana mitambatra amin'ny taona 2025, miaraka amin'ny fandrosoana azo tsapain-tanana amin'ny fanovana manan-tsaina sy maitso amin'ny rafi-pitaterana, araka ny drafitra.
Raha jerena ny taona 2035, ny drafitra dia mikendry ny hanangana "circular 1-2-3" ho an'ny dian'ny mpandeha sy ny fitaterana entana.
Midika izany fa ny fotoana fitsangatsanganana ao anatin'ny tanàn-dehibe sy vondron-tanàna, ary eo amin'ireo tanàn-dehibe dia ho tapaka ho adiny iray, adiny roa ary adiny telo. Afaka alefa ao anatin'ny fotoana fohy toy ny iray andro ao anatin'ny iray andro ny mailaka alefan'ny serivisy Shina, roa andro rehefa alefa any amin'ny firenena mifanila aminy, ary telo andro rehefa alefa any amin'ny tanàn-dehibe maneran-tany.
Amin'ny 2025, ny fiarovana ny fitaterana voamaina, angovo ary akora amin'ny fantsona lehibe dia hanana antoka matanjaka kokoa, ary ho voaro tsara kokoa ny rojo famatsiana lozisialy iraisam-pirenena, araka ny drafitra.
Hatsaraina ihany koa ny fifandraisana iraisam-pirenena, hoy ny drafitra, mamaritra ny ezaka hanatsarana ny fotodrafitrasa fitaterana miaraka amin'ireo firenena manodidina, hanosika ny fampandrosoana avo lenta Shina-Eoropa lalamby fiaran-dalamby, ary manangana "Lalan'ny Air Silk", ankoatra ny hafa.
Tsy misy marika ho an'ity lahatsoratra ity.
Tsy mitaky fitiliana PCR intsony i Rwanda ho an'ireo vahiny vao tonga
Ny lahatenin'ny CEO Schulte ho an'ny Fraport AGM Navoaka mialoha
Nisokatra indray ny tranombakoka DC-Area Freedom House miaraka amin'ny fampirantiana vaovao telo mahery
Olombelona sy ny natiora. Programan'ny Lehilahy sy ny Biosphere an'ny UNESCO
Nihaona tamin'ireo tompon'andraikitra ambony momba ny fizahantany any Meksika ny Delegasiona Bahamas
Niverina any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Jamaika ny Normalcy
2022 ProWein any Dusseldorf. Shine of Wines avy any Shina
Nitehaka ny sazy 7 taona ho an'ny fanondranana an-tsokosoko ny bibidia Ogandà
Ny mpandresy amin'ny Grammy Award dia mandrehitra ny sehatra any Barbados
Miverina miaraka amin'ny edisiona nohavaozina sy mivantana ny Miami Fashion Week®
Ghana ny Foibe Maneran-tany vaovao ho an'ny vahaolana feno fahasahiana momba ny faharetana sy ny fanarenana
Previous Hoavy vaovao amin'ny famolavolana ny United Airlines
Manaraka Fanarenana ny dia: Ny World Tourism Network dia mahita ny fotoana izao